Jorge Mendes oo si cad u qeexay mustqabalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Man United – Gool FM
Jorge Mendes oo si cad u qeexay mustqabalka Cristiano Ronaldo ee kooxda Man United
(Manchester) 31 Dis 2021. Jorge Mendes oo ah wakiilka xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, ayaa shaaca ka qaaday masiirka Don ee Red Devils iyo suurtogalnimada ah inuu baxo Janaayo.
Wararka xanta ah ee saxaafada qaar ayaa sheegaya in Cristiano Ronaldo uu ka fikirayo in uu isaga tago Manchester United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee jiilaalka.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa tilmaamay in Cristiano Ronaldo uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan sababa la xiriira qaab ciyaareedkiisa, iyo inuusan wax faa’iido ah u lahayn kooxda.
Laakiin Jorge Mendes ayaa ugu dambeyntii daaha ka qaaday masiirka Cristiano Ronaldo ee kooxda Manchester United isaga oo caddeeyay in uu xiddiga aad ugu faraxsan yahay inuu ku soo laabto safka Red Devils.
Jorge Mendes ayaa u sheegay shabakada Sky Sports ee dalkan Talyaaniga:
“Cristiano Ronaldo aad ayuu ugu faraxsan yahay kooxda Manchester United.”
“Ronaldo wuxuu sii wadi doonaa in uu soo bandhigo qaab ciyaareed xoogan oo cajiib ah sida had iyo jeer uu sameyn jiray xirfadiisa ciyaareed, waxaan hubaa in ay isaga u noqon doonto xilli ciyaareed aad u fiican.”
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu sanadkan 2021 ku soo gaba gabeeyay gool uu ka dhaliyay kooxda Burnley kulankii ugu dambeeyay oo ay Manchester United ku wada ciyaareen horyaalka Premier League, kaasoo ku dhammaaday 3-1 ay ku adkaatay Red Devils.
Kaddib Ferran Torres… xiddig kale ka tirsan Man City oo u sharaxan inuu ku biiro Barcelona